केसीका माग कसरी पूरा होलान् ?
ब्लग केसीका माग कसरी पूरा होलान् ? बाबुराम आचार्य
बाह्रखरी - मंगलबार, साउन ८, २०७५
सत्याग्रही प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीलाई सरकारले जुम्लाको अनशनस्थलबाट बिहीवार बलपूर्वक हेलिकप्टरबाट काठमाडांै ल्याएको छ । उनी २० दिनदेखि कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा अनशन बसेका थिए । डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक हुन् । उनलाई सरकारले काठमाडौं ल्याउन अपहरण शैली प्रयोग गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रका विकृतिको सुधारको माग राखेर १५ औं पटकको अनशनका लागि उनले जुम्ला रोजेका थिए ।
स्वास्थ्य अवस्था कमजोर देखिएपछि डा. केसीलाई जसरी भए पनि काठमाडौं ल्याइने चेतावनी केही दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलले दिइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एक दुईजना कराउँदैमा सरकार डराएर हिँड्दैन भनेका थिए भने शिक्षामन्त्रीले डा. केसीलाई कुनै पनि समयमा बल प्रयोग गरेर काठमाडांै ल्याउन सकिने जानकारी दिएका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललगायत नेकपाका अधिकांश नेता अनशनरत डा. केसीको विरोध गर्दै थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, राजपालगायतका दलहरु प्रा.डा. केसीको अनशनलाई समर्थन गर्दै आन्दोल गर्ने तरखरमा रहेका बेला बिहीवार सरकारले अपहरणको शैलीमा जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएको हो ।
सुरुमा सरकारी हेलिकप्टरमा काठमाडौं आउन नमानेका प्रा. डा. केसी काठमाडौं ल्याइएपछि अब के होला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अब के हुन्छ त ? डा. केसी नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा अनशन बस्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए र त्यसबेला डा. केसीको मागबाट उनी पनि तर्सिएको समाचार मिडियामा भाइरल भएको थियो ।
आखिरमा किन गोविन्द केसीमय भएको छ देश ? किन गोविन्द केसीलाई सरकारले महत्त्व दिएको हो ? किन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा. केसीको नाममा नेविसंघ, तरुण दललगायतका भातृसंस्थामार्फत देशव्यापी आन्दोलन चर्काइरहेको छ ।
नेपालमा राजनीतिका नाममा १७ हजार मान्छे मारिए, हजारौं अंगभंग गरिए, कैयौं घरपरिवार विस्थापित बनाइए । तर, तिनै हत्याराका प्रमुखहरुले देशमा शासन गरे । उनैको हातमा सत्ताको मुख्य बागडोर छ । राजा फालेर देश गणतन्त्रमा गए पनि शासकहरू नै साना राजा भएका छन् ।
नन्दप्रसाद अधिकारीे अधिकारका लागी अनशन बस्दाबस्दै मरे । उनकी पत्नी गंगामाया अहिले १० दिनका लागि अनशन स्थगित गरेर बसेकी छन् । तर, ढुक्क भए हुन्छ उनको अनशन पुनः शुरु हुन्छ । उनीसँग केही दिन अगाडि भएका सम्झौता सरकारले पूरा गर्दैन । नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र विश्वमै महँगोमध्येमा पर्छ । अनि स्कुल र अस्पतालका ९० प्रतिशत संचालक पनि कम्युनिस्ट नै छन् ।
गैरसरकारी संस्था बन्द गनुपर्छ भनेर कराउने कम्युनिस्टहरू अहिले झन्डै ९५ प्रतिशत गैरसरकारी संस्था चलाउँछन् । आखिर किन मुलुकमा जनता ढाँट्ने काम हुन्छ त ? विसं २०४७ सालबाट सरकारमा सबैभन्दा बढी रहेकोे नेपाली कांग्रेसले किन यस्ता विकृति रोक्न सकेन ? किन यस्ता बेथिति रोक्न सकेन ?
निर्वाचन अगाडि वाईफाई फ्री गर्छु भनेर जनतासँग मत माग्ने मेयरहरू कता हराए ? प्रदेश सांसद कता हराए ? प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु कता भागे ? फ्रीको त कुरै छाडिदिऊँ सरकारले त १३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेर इन्टरनेट झनै महँगो बनायो । विश्वबजारमा सस्तिँदै गएको इन्टरनेट सेवा यहाँ पनि सस्तो बनाउनेतिर सरकारको ध्यान गएन ।
डा. गोबिन्द केसीका माग जायज छन् भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभापति शेरबहादुर देउवा, अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललगायत लगभग सबै नेता मान्छन् । तर, उनका माग पूरा गर्न भने कुनै पनि नेता इमानदार भएर लागेको देखिएन ।
अहिले कांग्रेस करिब ५ वर्षका लागी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बाहिर छ । जनताको भावनालाई आफूतिर केन्द्रित गर्नमात्र कांग्रेसले सडक र सदनबाट डा. केसीको विषयलाई उचालेको जस्तो देखिएको छ । कांग्रेस इमानदार भएर लाग्ने हो भने डा. केसीका मागमात्र हैन बहुसंख्यक मुलुकका बेथिति हटाउन सक्छ । निष्ठा र इमान हुने हो भने संख्या गौण हुन पुग्छ । तर, त्यसका लागि कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दी हटाई स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर दूरदर्शी दृष्टि लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । नत्र, मौसमी आन्दोलनले कांग्रेसलाई क्षणिक फाइदा भए पनि दीर्घकालीनरूपमा कांग्रेसको अस्तित्व नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आइसकेको छ । अर्को लोकतान्त्रिक शक्ति उदाउन सक्ने आकलन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेको मिडियामा आइसकेकै छ ।
अब कांग्रेसले ३ करोड जनताकै माग पूरा गर्ने दिशामा अध्ययन गरेर आफ्नो पार्टीलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । मौसमी आन्दोलन गरेर क्षणिक फाइदाका पछि लाग्न छाड्नुपर्छ । कांग्रेसले अब वास्तवमा नै जनताको, अझ गरिब, दलित, विपन्न, पछाडि परेको वर्ग, महिला आदिको हितको लागि दत्तचित्त भएर लाग्न जरुरी छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सर्वसत्तावाद उन्मुख दुई तिहाइ मतको ओली सरकारलाई गलाउन भएको कांग्रेसको सबै बल प्रयोग गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
(तरुण दलका नेता )
मंगलबार, साउन ८, २०७५ मा प्रकाशित